NY VOKATRY NY FAHITALAVITRA SY
Anisan’ny zavatra mitazona ny mason’ny ankizy eo amin’ny fahitalavitra ny sarimiaina na « dessin animé ». Misy fiantraikany maro amin’ny ankizy mpijery ny sarimiaina, ka ilaina tsara ny mamantatra izany, hahaizantsika mitaiza ny taranaka araka izay tokony ho izy.
Tany amin’ny taona 1960, dia efa nanambara ny UNESCO fa, misy fiantraikany ratsy amin’ny fitomboan’ny zaza ny fijerena fahitalavitra, indrindra mijery maharitra eo. Efa lasa olan’ny fiarahamonina mihitsy ankehitriny izany. Satria dia efa manatona sy akaiky ny tokantrano rehetra ny fahitalavitra, ary toy ny mibahana ny fiainana sy ny fialam-bolin’ny maro.
Ny Tale Jeneralin’ny Fahasalamana frantsay, ny taona 2009, rehefa avy nahazo ny vokatry ny asan’ny manam-pahaizana manokana (taona 2008), dia nanambara fa tsy mety ny fisian’ny « chaîne » manokana ho an’ny zaza latsaky ny 3 taona. Miteraka fahakamoana, fahatarana amin’ny fitenenana, hendratrendratra, fikorontan’ny torimaso, tsy fifantohana, fiankinan-doha amin’ny fahitalavitra, herisetra, fitenenana mahery. Ireo no hitranga any aoriana kely any. Tsy manita-tsaina mantsy izay zatra miankin-doha amin’ny fahitalavitra.
Ny ekipam-pikarohana amerikana iray momba ny saina (neurologie), izay notarihan’i Jay GIEDD, dia nitondra izao valim-pikarohana izao. Eo amin’ny faha 6 taonan’ny zaza, dia efa mahatratra 90% amin’ny haben’ny atidoha no ananany. Feno tanteraka izany rehefa 11-12 taona izy. Miverina mihena indray anefa io haben’ny atidoha io, rehefa tsy miasa, noho ny fijerena fahitalavitra maharitra. Hoy ny tenin’ity manam-pahaizana ity : « soit on s’en sert, soit ça se perd ». Very tokoa ny atidoha rehefa tsy miasa, amin’ny alalan’ny fifintinany.
Marcel RUFO, pédopsychiatre frantsay kosa, tany amin’ny taona 1990, dia namoaka izay vokam-pikarohana izao, ho an’ny mpijery fahitalavitra mihoatra ny 50 mn. Lasa mizara telo ny fahombiazana sy ny fitadidiana, ho an’ny ankizy mpijery fahitalavitra. Raha naoty izany, ka nahazo 18/20 izy taloha, dia mety ho 06/20 sisa. Avo telo heny koa anefa ny fitiavana herisetra ao aminy, eo ankilany. Ary azo jerena sahady ny fifamatoran’ny fijerena fahitalavitra sy ny lalan’ny olona iray hahatongavany eny amin’ny fitsarana, noho ny heloka mety hataony.
Hifantoka amin’ny sarimiaina isika eto. Tsy mahay manavaka izay tena izy sy ny sary foronina ny zaza sy ny ankizy, fa marina daholo izay jereny eo amin’ny fahitalavitra. Tena misy « pouvoir » amin’ny ankizy ary ny sarimiaina jereny eo. Izay ankizy mpijery « superman » dia mety alaim-panahy hitsambikina eny ambony rihana, satria mipetraka any amin’ny sosotsainy (inconscient) ireny ka manetsika ny vatany fotsiny hanao izay hitany.
Vao mainka mafy kokoa ny fiantraikan’ireny sarimiaina ireny, rehefa somary tsy tomombana ara-tsaina sy moraly ny ankizy (désequilibré, fragile,...). Hahavita zavatra ratsy noho ny ankizy tomombana izy ireo, raha tsy misy fanaraha-maso akaiky hatrany.
Mitaky Ray aman-dreny eo akaikiny ary ny zaza sy ny ankizy rehefa mijery sarimiaina. Miara-mijery aminy eo isika, manazava sy manoro azy izay miseho eo. Aza avela hotaizain’ny fahitalavitra irery ny zanatsika, fa tsy mahalala izay mijery azy toa anao ray aman-dreny akory ny fahitalavitra. Fa rehefa eo kosa ianao, dia hahasoa azy ireny sarimiaina ireny, satria voazavanao avokoa io, ka tsy ahiana ny toe-javatra sarotra mety hataony any aoriana.
Ny karazana sarimiaina koa dia tsara fantarina. Ireny sarimiaina izay mitohitohy ireny dia misy na mampalahelo hatrany, na misedra zavatra mafy : lasa kanosa sy katahotra ny ankizy, ka midina be ny moraly ananany. Izay sarimiaina mivoaka ho mpandresy hatrany no tsara hiarahana mijery, dia manefy azy hanana izany mikendry fandresena izany any aoriana.
Ny teknika nandrafetana ny sarimiaina koa anefa dia misy fiantraikany amin’ny zaza sy ny ankizy. Ny sarimiaina Bob l’éponge, ohatra, dia tena haingana be ny fiovaovan’ny sary asehony : 11 segondra eo dia miova. Tsy mitaiza (éducatif) mihitsy izany, satria manimba ny fifantohana, ny saina te hianatra. Ny mpamokatra ity sarimiaina iray ity moa, dia efa nanao fanamarihana fa, ho an’ny ankizy 6-11 taona io Bob l’éponge io. Mitsinjo lavitra ny hoavin’ny taranaka ary isika, miendrika fahaiza-mitantana ny fiainany any aoriana.
Vendredi 10 Avril 2020 - 1:18:00